बागमती प्रदेश « Janata Samachar
झाँक्रीको भर पर्दा सुत्केरीको मृत्यु
नुवाकोट । झाँक्रीको भर परेर स्वास्थ्य संस्थामा नलैजाँदा सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ बेतिनी हिलेकी २४ वर्षीया सुत्केरी माइली तामाङको बुधबार राति मृत्यु भएको हो
धादिङमा भूकम्प गयो
काठमाडौं । धादिङमा बिहिबारु बिहान भूकम्प गएको छ । झारलाङ आसपास केन्द्रबिन्दु भई गोरखा भूकम्पको परकम्प गएको हो । बिहान ७ः२१ बजे ४.१ रेक्टर स्केलको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन
नारायणगढ–मुग्लिङ सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा
चितवन । पहिरो खसेका कारण बुधबार बिहानैबाट अवरुद्ध नारायणगढ मुग्लिङ सडक खण्ड दुई तर्फी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । काली खोला र टोपे खोलामा खसेका दुई वटा ठूला पहिरो हटाइएसँगै
जुम्ला र वीर अस्पतालमा कांग्रेस सांसदको समूह परिचालन किन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको मागसहित जुम्लामा आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सांसदको समूह खटाउने निर्णय गरेको छ । डा केसीको
उपत्यकाको १ सय ४३ स्थानमा अस्थायी पार्किङ(हेर्नुस्, कहाँ कहाँ पार्किङ गर्न पाइन्छ ? )
काठमाडौ । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनका लागि उपत्यकाको १ सय ४३ स्थानमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनलाई अस्थायी पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले
ललितपुर । व्यापारिक समुदायले आफ्नो व्यवसाय पर्वद्धनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उत्तरदायीपूर्ण ढंगबाट व्यवसाय पर्वद्धनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय
काठमाडौं । ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनका लागि उपत्यकाको १४३ स्थानमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनलाई अस्थायी पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका ६०
पशुपति क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित ‘‘प्रि–फ्याब’ भवन,विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने चिन्ता
काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड विपरित दुई वटा ‘प्रि–फ्याब’ (अस्थायी प्रकृतिका)भवन बनाइएको छ । विसं २०६४ देखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यालय
रसुवामा भएको सवारी दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
रसुवा । उत्तरी रसुवाको सिम्बु क्षेत्रमा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा गएराति घटनास्थलमै दुईजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख सन्तोष तामाङका अनुसार मृत्यु हुनेमा मोरङ जिल्ला घर भएका अन्दाजी
जोखिमलाई सम्बोधन गर्न कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरोको जोखिमलाई ध्यान दिँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाएको छ । प्राकृतिक विपद्का प्रभावितलाई आपत्कालीन आवास, प्राथमिक